विद्यार्थी नियमित बनाउन अभिभावकलाई सधैं फोन गर्ने स्कूल ! | Aaja ko Shiksha
विद्यार्थी नियमित बनाउन अभिभावकलाई सधैं फोन गर्ने स्कूल !
मुख्य समाचार , फिचर
‘रेखा मुखिया, बासमति मुखिया र जानकीदेवी आज खोई त ?’
एकजना शिक्षकले प्रधानाध्यापक मञ्जु कट्टेलतिर फर्केर प्रश्न गर्नुभयो ।
‘विद्यालयमा बोलाउन आज उहाँहरुलाई चाँडै जानकारी भएन, खेतमा गइसक्नु भएछ,’ प्रत्युत्तर आयो ।
यी तीनजनाको नाम विद्यालयमा हुने हरेक बैठकमा छुट्ने गर्दैन । विद्यालयको हरेक निर्णय र काममा उहाँहरु चासो राख्नुहुन्छ अनि सहभागी बन्नुहुन्छ । विद्यार्थी टन्न छन् र विद्यालय सधैं आउँछन् पनि । तर, आमा अभिभावकहरु विद्यालय आएर बालबालिकाको हाजिरी एकपल्ट नपल्टाई चित्तै बुझाउँदैनन् । माइ अर्थात् समूह यो विद्यालयमा निकै सक्रिय छ ।
धनुषाको बरमभझिया–९ लालबहादुर टोलमा रहेको जनता राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा आजकाल अभिभावकको सक्रियता यस्तै हुने गर्छ । यो यत्तिकै भएको भने होइन । यसमा खास हात छ शिक्षकहरुकै अनि व्यवस्थापन समितिको पनि । ‘दुई–तीन दिन बच्चा नआउँदा फोन गरिहाल्छौं,’ फोन डायरी पल्टाउँदै प्रधानाध्यापक मञ्जु भन्नुहुन्छ, ‘यी हेर्नाेस् न, प्रत्येक अभिभावकको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर अनि उहाँहरुको नामनामेसी सबै छ ।’ शुरु–शुरुमा विद्यार्थी संख्या त हुन्थ्यो तर आधाभन्दा बढी नै अनुपस्थित । विद्यालयका निम्ति निकै टाउको दुखाई भयो–अब कसरी सधैं विद्यार्थी आउने बनाउने ? शिक्षक र विव्यस छलफलमा जुटे । अब प्रत्येक अभिभावकको सम्पर्क नम्बर राख्ने अनि हरेक विद्यार्थीको छुट्टाछुट्टै फाइल बनाउने । यो निष्कर्षलाई व्यवहारमै उतार्न थालियो । मेलापातमा रहेका अभिभावकको फोनमा घण्टि बज्न थाल्यो । अभिभावकले ‘हेलो !’ भन्न नपाउँदै ‘हेलो ! कता हुनुहुन्छ ? खेततिर कि घरमा ? सञ्चै छ ?’ आदि प्रश्न ओइरिहाल्छन् । ‘ठीकै छु हजुर को बोल्नु’भो...?’ अभिभावकको प्रतिप्रश्नको उत्तर आइहाल्छ, ‘म स्कूलका शिक्षक हुँ । तपाईँका छोरछोरी तीन दिनदेखि स्कूल आएका छैनन्, के कारण हो ?’ यसरी विद्यालयबाट प्रत्यक्ष फोन नै आउन थालेपछि अभिभावक शुरुमा त अक्क न बक्क परे तर बिस्तारै यो आफ्नै लागि हो रहेछ भन्ठाने । शिक्षकहरु यत्तिकै सोधेर मात्र छोड्ने गर्दैनन् । बालबालिका कहाँ, किन र कुन अवस्थामा छन् ? अभिभावकले दिएको जवाफका आधारमा शिक्षकहरु कारणसहितको फाइल भर्छन् । फाइलको नाम राखिएको छ, ‘निक शिक्षा दिअ–विद्यार्थीको नियमितता अनुगमन पुस्तिका ।’ यस पुस्तिकामा अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चा कोही ‘मामा घर गएको,’ कोही ‘स्कूल गएको त थियो तर बाटैबाट फर्केर आएछ’ भन्ने गर्दारहेछन् । तिनै अभिभावकलाई विद्यालयले बोलाएर छलफल गर्दाे रहेछ । अनि नियमित पढ्न पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गराउँदो रहेछ । यसरी फोन नै गरेर बालबालिका कहाँ छन् भनेर विद्यालयबाट शिक्षकले सोध्दा अभिभावकले ‘ए मलाई त फोन पो गरे, मेरो पनि विद्यालयमा ठूलै स्थान रहेछ’ भन्ठान्ने रहेछन् । यो विधि अपनाउँदा अहिले यस विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति सोचेभन्दा बढी भएको शिक्षकहरु सुनाउँछन् । हुन पनि, यो स्कूलमा विद्यार्थी संख्या १८७ रहेको छ । ‘फोनिङ’ र ‘फाइल प्रणाली’का कारण अहिले प्रायः सबै विद्यालय आउँछन् ।
यति मात्रले विद्यार्थी विद्यालयमा नटिक्लान् कि भन्ने चिन्ता व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सहदेव मुखियामा परेको छ । उहाँ विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण बनाउन प्राङ्गणभित्र रुख रोप्ने योजनामा हुनुहुन्छ । बुवाको मृत्युपछि गरिएको काजक्रियामा भोज खुवाउनुभन्दा गाउँलेहरुले विद्यालयलाई जग्गा देऊ भनेपछि आफूले दुई कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यही स्कूल वरिपरिका बालबालिकालाई भर्ना गराउन गजबको बुद्धि अपनाइएको छ । त्यसका लागि गाउँको आमा समूहमार्फत् ‘ठूलदिदी’ खट्नुहुँदो रहेछ । भर्ना भएर पनि विद्यालयमा को–को जाँदा रहेनछन् ? तिनलाई स्कूलसम्म ल्याउन ठूलदिदीको ठूलो सक्रियता हुने गर्छ । जसको बालबालिका विद्यालय आउँदैनन्, तिनका घरसम्मै पुग्ने गर्नुहुन्छ ठूलदिदी । अभिभावकसँग ठूलदिदीले ‘घरभेट’ गरेपछि बालबालिका विद्यालय लाजले पनि पठाउने गर्छन् । ठूलदिदीले बच्चालाई सरसफाई गरिदिएर अझ ड्रेस लगाइदिएर विद्यालय पठाउन मद्दत गर्ने गरेको अभिभावकहरु सुनाउँछन् ।
आमा समूहले ल्याएको परिवर्तन
‘निक शिक्षा दिअ’ अर्थात् राम्रो शिक्षाका निम्ति धनुषाका आमा अभिभावकहरु निकै सक्रिय देखिनुभएको छ । बबिता देवी धनुषा गणेशमान चारनाथ गाउँपालिका महराटोलकी बासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँको टोलमा अधिकांश दलित समुदाय छन् । शुरु–शुरुमा बालबच्चालाई विद्यालयमा राम्ररी पोशाक लगाइदिएर पठाउनु पर्छ भन्नेसम्म बबिता देवीमा ज्ञान थिएन । ‘अहिले त म यसमा निकै ध्यान दिने गर्छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । बालबालिकाको लगाइमा मात्र नभई पोषण र खुवाइमा पनि उहाँ विशेष ख्याल गर्नुहुन्छ । शुरुमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनै नमान्ने अभिभावक थिए । निक शिक्षा दिअ परियोजना शुरु भएपछि टोलमा आमा समूह जम्मा गरी अभिमुखीकरण दिइएछ । त्यसपछि आमाहरुले ‘पार्वती आमा समूह’ बनाए । नजिकैको मावि बरमझियामा बालबच्चालाई पठाउन थाले । पठाउन नमान्ने अभिभावकलाई फकाएर भएपनि उनीहरुका बालबच्चा विद्यालय पठाइए । बालबालिका पठाउन त पठाइयो तर विद्यालयभित्र बसिसक्नु थिएन । डेस्क–बेञ्च नै भएन । विद्यालयभित्र पूरै फोहोर । विद्यालय पठाइएका बालबालिका बीचैमा कक्षा छोडेर घर फर्कन थाले । यस्तो स्थितिमा आमा समूहले स्कूलमै गई शिक्षकहरुसँग छलफल गरे । सफा–सुग्घर विद्यालय बनाउन सल्लाह दिए । त्यत्ति मात्र नभएर घर–घरमा पनि बालबालिकालाई राम्ररी हातगोडा धुन सिकाए । एक–दुई महिनामा गाउँ र विद्यालयमा गजबको परिवर्तन महशूस देखिन थाल्यो । यो महशूस खासगरी अभिभावक र शिक्षक दुबैले गरेछन् । आमा समूहकी सदस्य तथा अभिभावक अमृति देवीले भन्नुभयो, ‘हामीले यति मात्रैले चित्त बुझाएनौं । स्कूलमा पढाइ भइरहेको छ कि छैन, शिक्षक नियमित छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षण गर्ने गर्छाैं ।’ अहिले त मावि बरमझियामा आमा समूहकै एकजना दलित महिला विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्य हुनुभएको छ । आमा समूहको निगरानीले गर्दा बालबालिकालाई विद्यालय प्रशासनले छात्रवृत्ति पनि दिएको छ । छात्रवृत्तिस्वरुप पाइएको रकमले आफ्ना बालबालिकाका लागि ब्याग, किताब, खाजा खाने टिफिन बट्टा अभिभावकहरुले किनेका छन् । यस पछि त कलिला बालबालिका फुरुङ्ग हुँदै विद्यालय जान थालेको अमृति देवी सुनाउनुहुन्छ ।
तराईमा बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपनि नियमित नआउने ठूलो समस्या छ । खासगरी दलित, पिछडिएको तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विद्यालय नियमित जाँदैनन् । वार्षिक परीक्षामै झण्डै दुई तिहाई विद्यार्थी सामेल नभएको तथ्य नगराइन नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई नियमित गराउन आमा समूह, विद्यालय आफैंले गरेका प्रयत्न उदाहरणीय मोडल लाग्छन् । तथापि, बालबालिका किन विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने मूल कारणचाहिँ आर्थिक र चेतनाको कमी नै हो भन्नेमा दुई मत देखिन्न । सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको ध्यान खासमा यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने टड्कारो देखिन्छ ।
साभारः बाल आवाज, शिक्षा पत्रकार समूह